पाथीभरा माताले तपाईको मनोकामना पूरा गरुन् ! हेर्नुहोस् , २०७७ जेठ ०९ गते को राशिफल
अनलाइन पत्र संवाददाता प्रकाशित मिति ९ जेष्ठ २०७७, शुक्रबार ०८:२६ 145 0
बि.सं. २०७७ जेठ ०९ गते शुक्रवार । इ.सं. 22 May 2020 । शक संवत १९४२ । नेपाल संवत ११४० बछलाथ्व । प्रमादी । उत्तरायण । ग्रीष्म ऋृतु । ज्येष्ठ कृष्णपक्ष । तिथि औंसी , २३:०२ बजे उप्रान्त प्रतिपदा । नक्षत्र कृत्तिका , २७:२३ बजे उप्रान्त रोहिणी । योग शोभन , ०७:०७ बजे उप्रान्त अतिगण्ड । करण चतुष्पद १०:२४ बजेदेखि नाग , २३:०२ बजे उप्रान्त वालव । चन्द्रराशि मेष । आनन्दादी योग छत्र । दिनमान ३३ घडी ५८ पला । सूर्योदय ०५: १३ बजे । सूर्यास्त बेलुका १८: ४९ बजे ।
दर्शश्राद्ध। हलो तथा निशि बार्ने औंसी। वटसावित्री व्रत। शनि जयन्ती।
तेल र मसालादार आहार नगर्नुहोस्। आशिष् र राम्रो भाग्य तपाईंको बाटोमा आउनाले इच्छा पूरा हुनेछ – र यो अघिल्लो दिनको कठिन कामको परिणामले गर्दा हो। तपाईं आफ्नो सोख गरेर साथै परिवारका सदस्यहरूलाई मद्दत गरेर केही समय बिताउन सक्नु हुनेछ। शरद ऋतुको रूख। तपाईं सबैको लागि आज धेरै सक्रिय र सामाजिक कार्य गर्ने राम्रो दिन हुनेछ – मानिसहरूले सल्लाहको लागि तपाईंको मुख हेर्नेछन् र तपाईंले जे भन्नुहुन्छ त्यही मान्नेछन्। तपाईंको जोडीले छिमेकीमा सुनेको कुरालाई लिएर मुद्दा बनाउन सक्छन् ।
आफ्नी पत्नीसँग पारिवारिक समस्या साझेदारी गर्नुहोस्। मायालु र एकअर्काको पोषण गर्ने दम्पतीको रूपमा आफूलाई पुन स्थापित गर्न र पुन: पत्ता लगाउन एकअर्काप्रति केही समय बिताउनुहोस्। तपाईंका छोराछोरीले पनि घरमा सुख र शान्ति सद्भावको तरङ्ग महसुस गर्न सकुन्। यसले तपाईंहरू दुवैलाई आफ्नो बातचीत ऐच्छिक रूपमा र स्वतन्त्रतासँग गर्न मद्दत पुर्याउनेछ। तपाईंले धेरै अनपेक्षित स्रोतहरूको मार्फत कमाउने सम्भावना छ। तपाईं आज उपस्थित भएको समारोहमा नयाँ मित्रता विकास हुनेछ। आज आफ्नो प्रियको भावना बुझ्नुहोस्। तपाईंको पेशाको दक्षता परीक्षण गरिनेछ। तपाईंले इच्छित परिणाम प्रदान गर्नको लागि आफ्नो प्रयासमा ध्यान दिनु आवश्यक छ। तपाईं र तपाईंको जोडीलाई आज अचम्मको समाचार प्राप्त हुन सक्छ ।
दिनभरि आनन्दित रहनको लागि मानसिक कष्ट र तनाउबाट जोगिनुहोस्। आफ्नो निवासको विषयलाई लिएर लगानी गर्नु लाभदायक हुनेछ। आफ्नो गृहकार्य पूरा गर्न छोराछोरीलाई सहयोग गर्ने उचित समय। तपाईंको समर्पित र शुद्ध प्रेममा रचनात्मक शक्तिको जादू छ। रचनात्मक क्षेत्रका व्यक्तिहरूको लागि सफल दिन, किनकि तिनीहरूले लामो प्रतीक्षा पश्चात ख्याति र पहिचान पाउने छन्। तपाईंको जोडी आज ऊर्जा र प्रेमले भरिएको हुनेछ ।
आफ्नो निराशावादी मनोवृत्तिको कारण तपाईं कुनै प्रगति गर्न असमर्थ हुनुहुन्छ। यो तपाईंलाई चिन्ताले आफ्नो सोच्ने शक्ति घटेको छ भन्ने महसुस गर्नको लागि सही समय हो। उज्यालो तर्फ हेर्नुहोस् र तपाईंले आफ्नो विवेकमा निश्चित परिवर्तन भएको पाउनु हुनेछ। एउटा नयाँ आर्थिक सम्झौता तय हुनेछ र नयाँ पैसा प्राप्त हुनेछ। सामाजिक गतिविधिहरुमा मजा हुनेछ तर तपाईंले अरूसित आफ्नो रहस्य साझा नगर्नुहोस्। तपाईंको प्रेमीले आज उपहारका साथ केही समयको आशा गर्न सक्छन्। तपाईंले लामो समयदेखि काम गरिरहेको एउटा महत्त्वपूर्ण परियोजनामा ढिलाइ भएको छ। आज यात्राको लागि धेरै राम्रो दिन छैन। यो तपाईंका जीवनसाथीसँग रोमान्स गर्ने राम्रो दिन हो ।
तपाईंको ऊर्जा स्तर उँचो हुनेछ। आफ्ना आउने पीढीको लागि विशेष केहि योजना गर्नहोस्। तपाईंले तिनीहरूले हासिल / कार्यान्वयन गर्न सकून् भनेर केही व्यावहारिक योजना निश्चित गर्नुहोस्। तपाईंको आउने पुस्ताले तपाईंलाई यस उपहारको लागि सधैं सम्झना गर्नेछ। आफ्नो प्रिय वा जोडीबाट राम्रो सञ्चार वा सन्देशले आज तपाईंको हौसलामा बृद्धि गर्नेछ। आज तपाईं रोशनीमा हुनुहुनेछ – र सफलता तपाईंको सामर्थ्य भित्रै छ। तपाईंलाई मद्दत गर्ने मानिसहरूको लागि तपाईंले प्रतिबद्धता बनाउनु हुनेछ। तपाईंलाई आजको दिन आफ्नो वैवाहिक जीवनको सबैभन्दा राम्रो दिन अनुभव हुनेछ।
आफैं उपचार नगर्नुहोस् किनकि दबाइमा निर्भरताको सम्भावना बढ्न सक्छ। आफ्नो परिवारलाई उचित समय दिनुहोस्। तिनीहरूलाई तपाईंले ध्यान दिनुहुन्छ भन्ने महसुस गराउनुहोस्। तिनीहरूसँग आफ्नो गुणस्तरको समय बिताउनुहोस्। गुनासो गर्ने कुनै पनि मौका नदिनुहोस्। यो अन्य देशहरूमा व्यावसायिक सम्पर्कका सुधार ल्याउने एउटा उत्कृष्ट समय हो। आज आफ्नो जीवन साथीले भर्खरै भएका नराम्रा घटनाहरूको बिर्सेर तपाईंलाई सबै राम्रो भावना प्रकट गरेर देखाउनेछन्।
आफुलाई शान्त राख्न मद्दत गर्ने गतिविधिहरुमा आफैलाई संलग्न गर्नुहोस्। अरू मान्छेको सुझाव सुन्ने र काम गर्ने यो एउटा महत्त्वपूर्ण दिन हो। कठिन चरण पछि, आज तपाईंको काममा केहि राम्रो कुरा हुनाले आश्चर्य हुनेछ। बाहिरी मान्छेको हस्तक्षेपले आफ्नो वैवाहिक जीवनमा रोकावट प्रदान गर्नेछ ।
आनन्ददायी यात्रा र सामाजिक भेलाहरूले तपाईंलाई तनाउमुक्त र खुसी राख्नेछ। विशेष गरेर प्रमुख वित्तीय सम्झौतामा बातचीत गर्दा, हतारमा निर्णय नलिनुहोस्। आज तपाईंले आफ्नो बुद्धि र प्रभावलाई घरका संवेदनशील विषयहरूको समाधान गर्न प्रयोग गर्नु आवश्यक छ। तपाईं मायालु मुडमा हुनुहुनेछ – त्यसैले आफ्नो र आफ्नो प्रियको लागि विशेष योजना बनाउने निर्णय गर्नुहोस्। तपाईं मेहनत र धैर्य मार्फत आफ्नो लक्ष्यमा पुग्नुहुनेछ। आध्यात्मिक गुरू वा बुजुर्गले मार्गदर्शन गर्नेछन्। तपाईंको जीवनसाथी कहिल्यै आजभन्दा रमाइलो थिएनन्।
तपाईंले आफ्ना वरिपरिका मानिसहरू अत्यधिक माग गर्ने पाउनुहुनेछ – तपाईंले गर्न सक्ने भन्दा बढीको प्रतिज्ञा नगर्नुहोस् – र अरूलाई खुसी पार्नको लागि आफुलाई गलाउन जोड नदिनुहोस्। तपाईंले आफ्ना छोराछोरीबाट केही सिक्नु हुनेछ। तिनीहरूमा धेरै शुद्ध प्रभामण्डल छ र आफ्नो निर्दोष हर्ष र नकारात्मकताको अभावको कारण तिनीहरूले वरिपरि परिवर्तन गर्न सक्छन्। कसैले पनि तपाईंको प्रेम अलग गर्न सक्ने छैन। नयाँ योजना र उद्यम लागू गर्नको लागि राम्रो दिन। विवाह यौनको लागि मात्रै हो भनेर भन्नेहरूले ढाँट्छन्। किनभने, आज तपाईंलाई साँचो प्रेम के हो भन्ने थाहा हुनेछ।
सामाजिक डरले तपाईंलाई सताउन सक्छ। यसलाई हटाउन आफ्नो आत्मसम्मानलाई प्रोत्साहन गर्नुहोस्। तपाईंले आफ्नो प्रतिष्ठामा एउटा नयाँ मणि थपेको कारण तपाईंको उपलब्धिले आफ्नो परिवारका सदस्यहरूको हौसला बढाउनेछ। आफुलाई अरूको आदर्श पात्र बनाउन कठिन प्रयास गर्नुहोस्। प्रेमको खुशीयाली अनुभव गर्न सक्नु हुनेछ। तपाईंका वरिपरिका मानिसहरूलाई यस्तो काम गर्न सक्नेछन् जसले गर्दा तपाईंको जीवनसाथी फेरी तपाईंमा समर्पित हुनेछन्।
अनावश्यक रूपमा आफैलाई कोस्नाले जाँगर मार्दछ। घरमा केही परिवर्तनले तपाईंलाई अत्यधिक भावुक बनाउनेछ – तर तपाईं प्रभावकारी ढंगले तपाईंको कुरा बुझ्ने मानिसहरूलाई आफ्नो भावना प्रकट गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। तपाईंका जोडीको स्वास्थ्य नराम्रो हुनाले आज प्रेममा बाधा पर्नेछ। महत्वपूर्ण मान्छेसँग अन्तरक्रिया गर्नाले तपाईंलाई राम्रो विचार र योजना ल्याउनेछ। आफ्नो जोडीको व्यवहारले आज तपाईंको व्यावसायिक सम्बन्धमा बाधा पर्न सक्छ।
आजको मनोरञ्जनमा खेल गतिविधिहरु र घर बाहिरका कार्यहरू समावेश हुनुपर्छ। ढिलो भएका भुक्तानी प्राप्त भएकोले पैसाको समस्यामा सुधार भएको छ। यो अवधि आफ्नो नयाँ परियोजनाहरू र योजनाको सन्दर्भमा आफ्ना आमाबाबुलाई विश्वासमा लिनका लागि राम्रो छ। कसैको हस्तक्षेपले तपाईंको प्रियतमासँगको सम्बन्ध तनाउपूर्ण हुन। आज तपाईंको मनमा आएका नयाँ पैसा बनाउने विचारको फाइदा लिनुहोस्। दान र सामाजिक कार्यले आज तपाईंलाई आकर्षित गर्नेछ – तपाईंले महान कार्यको लागि आफ्नो समय दिनुभयो भने तपाईंले धेरै परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ। आज खर्चको कारण आफ्नो जीवनसाथीसँग तपाईंको सम्बन्ध बिग्रिन सक्छ।
पाथीभरा माताको दर्शन गर्दै ! हेर्नुहोस् ,२०७७ जेठ १८ गते को तपाइको राशिफल
पाथीभरा माताको दर्शन गर्दै ! हेर्नुहोस् ,२०७७ जेठ १७ गते को तपाइको राशिफल
पाथीभरा माताको दर्शन गर्दै ! हेर्नुहोस् ,२०७७ जेठ १६ गते को तपाइको राशिफल
आज २०७७ जेठ १५ गते बिहीवार राशिफल